သငျ့ခဈြသူ သငျ့ကိုလှမျးလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ
HomeLoveသငျ့ခဈြသူ သငျ့ကိုလှမျးလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ
သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို လှမျးနတောမြိုး လိုခငျြပါသလား။ သူ သငျ့ကို လှမျးလာဖို့ ဘာတှလေုပျဖို့ လိုအပျပါသလဲ။ သငျ့တနျဖိုးတှကေို သူနားလညျလာအောငျ လုပျရမယျ့ နညျးလမျးတှကေို ရှာကွညျ့ပွီးပါပွီလား။ Lovemedia ရဲ့ ဒီဆောငျးပါးလေးကတော့ ဘဝမှာ ကိုယျခဈြရတဲ့သူ နားလညျလာစဖေို့ အရေးကွီးတဲ့ အကွောငျးတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။
သငျ့ခဈြသူက သငျ့တနျဖိုးကို နားလညျလာစဖေို့ဆိုရငျ သူ့ကို အနိုငျကငျြ့နတောတှေ ရပျလိုကျပါ။ သူ့ကို ထပျခါထပျခါ အနိုငျကငျြ့ ဗိုလျကပြွီး ဆိုးနမေယျဆိုရငျ သူ့ဘကျက မှနျတယျလို့ မှတျယူသှားပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ဘကျက အဆုံးထိ မပွောငျးလဲဘူးလို့လညျး ထငျနမှောပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျဟာ အရေးပါသူအဖွဈ သငျ့ခဈြသူက လှမျးနရေအောငျ လုပျဖို့လိုပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အရေးပါမှုကို သိဖို့ဆိုရငျ အဆကျအသှယျအားလုံး ဖွတျဖို့လိုပါတယျ။ သူ့ကို ရကျအနညျးငယျလောကျ ပဈထားပွီး မသိခငျြယောငျဆောငျနလေိုကျပါ။ သငျ့ခဈြသူကို အထီးကနျြသလို ခံစားရအောငျ လုပျဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလိုလုပျခွငျးဖွငျ့ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ဥပက်ေခာပွုမှုက နာကငျြခံစားရပါလား ဆိုတာ သငျ့ခဈြသူ နားလညျလာပါလိမျ့မယျ။
2. သူ့ဘကျက ဖုနျးချေါလာရငျ မကိုငျပါနဲ့၊ message လညျး ပွနျမပို့ပါနဲ့။
ImgSrc – collegegloss
ဒုတိယအခကျြအနနေဲ့ လုပျရမှာက သူ့ဘကျက ဖုနျးချေါလာရငျ မကိုငျမိအောငျ၊ message ပို့လာရငျ ပွနျမပို့မိအောငျ ကွိုးစားရပါမယျ။ တဈခါတရံမှာ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ဂရုမစိုကျတာတှေ၊ မဆိုငျသလို နလေိုကျတာတှကေ သိသာတယျဆိုတဲ့ အကွောငျး သူသိဖို့ လိုပါတယျ။ သငျ့ဘကျက ဖုနျးမကိုငျတဲ့အခါ၊ message ပွနျမပို့တဲ့အခါ သငျ့ခဈြသူက သူ့ဘကျက မှနျတယျလို့ မယူဆတော့ပါဘူး။
3. Social media သုံးတာ နားလိုကျပါ။
သူမြားတှေ social media ကို အသညျးအသနျ သုံးနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျက လကျရှိသုံးနတေဲ့ social media ကို ကနျ့သတျလိုကျပါ။ ဒီနညျးဖွငျ့လညျး သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို သတိရလာပါလိမျ့မယျ။ သူ့ဘေးမှာ သငျမရှိတာဟာ ဘယျလောကျတောငျ ဆိုးဝါးလဲ ဆိုတာ သူ မသိလာမခငျြး ဒီနညျးတှကေို ဆကျသုံးပါ။ အဲဒီနညျးနဲ့ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို လှမျးပွီးရငျး လှမျးလာပါလိမျ့မယျ။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုလွမ်းလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို လွမ်းနေတာမျိုး လိုချင်ပါသလား။ သူ သင့်ကို လွမ်းလာဖို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ သင့်တန်ဖိုးတွေကို သူနားလည်လာအောင် လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာကြည့်ပြီးပါပြီလား။ Lovemedia ရဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ဘဝမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ နားလည်လာစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
သင့်ချစ်သူက သင့်တန်ဖိုးကို နားလည်လာစေဖို့ဆိုရင် သူ့ကို အနိုင်ကျင့်နေတာတွေ ရပ်လိုက်ပါ။ သူ့ကို ထပ်ခါထပ်ခါ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျပြီး ဆိုးနေမယ်ဆိုရင် သူ့ဘက်က မှန်တယ်လို့ မှတ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဘက်က အဆုံးထိ မပြောင်းလဲဘူးလို့လည်း ထင်နေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် သင်ဟာ အရေးပါသူအဖြစ် သင့်ချစ်သူက လွမ်းနေရအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့အရေးပါမှုကို သိဖို့ဆိုရင် အဆက်အသွယ်အားလုံး ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူ့ကို ရက်အနည်းငယ်လောက် ပစ်ထားပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ပါ။ သင့်ချစ်သူကို အထီးကျန်သလို ခံစားရအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဥပေက္ခာပြုမှုက နာကျင်ခံစားရပါလား ဆိုတာ သင့်ချစ်သူ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
2. သူ့ဘက်က ဖုန်းခေါ်လာရင် မကိုင်ပါနဲ့၊ message လည်း ပြန်မပို့ပါနဲ့။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လုပ်ရမှာက သူ့ဘက်က ဖုန်းခေါ်လာရင် မကိုင်မိအောင်၊ message ပို့လာရင် ပြန်မပို့မိအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ တစ်ခါတရံမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဂရုမစိုက်တာတွေ၊ မဆိုင်သလို နေလိုက်တာတွေက သိသာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သူသိဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ဘက်က ဖုန်းမကိုင်တဲ့အခါ၊ message ပြန်မပို့တဲ့အခါ သင့်ချစ်သူက သူ့ဘက်က မှန်တယ်လို့ မယူဆတော့ပါဘူး။
3. Social media သုံးတာ နားလိုက်ပါ။
သူများတွေ social media ကို အသည်းအသန် သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ သင်က လက်ရှိသုံးနေတဲ့ social media ကို ကန့်သတ်လိုက်ပါ။ ဒီနည်းဖြင့်လည်း သင့်ချစ်သူက သင့်ကို သတိရလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ဘေးမှာ သင်မရှိတာဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးဝါးလဲ ဆိုတာ သူ မသိလာမချင်း ဒီနည်းတွေကို ဆက်သုံးပါ။ အဲဒီနည်းနဲ့ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို လွမ်းပြီးရင်း လွမ်းလာပါလိမ့်မယ်။